Zvokudya zveDoogestrel Zvakatengeswa (54024-22-5): Ongororo & Dosage & Migumisiro | AASraw
Zvokudya zveDoogestrel Zvakatengesa: Ongororo & Dosage & Migumisiro
/Blog/Desogestrel/Zvokudya zveDoogestrel Zvakatengesa: Ongororo & Dosage & Migumisiro
Posted on 06 / 28 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora Desogestrel. Izvo zvine 0 Comment.
Zvose zveDoogestrel Powder
3. Mechanism Of Action-Desogestrel Powder
4.How Kushandisa Desogestrel Powder?
6.Ndivanaani vangashandisa powusi waDoogestrel?
7. Kubatsira uye kukanganisa-Desogestrel Powder
9.Desogestrel Dambudziko rePowidhe paunenge uchingoberekwa
10.Desogestrel Poda Yokutengesa
I.Desogestrel powderbasic Mifananidzo:
Desogestrel uye ethinyl estradiol kusanganiswa kunoshandiswa kudzivirira kubata pamuviri. Iro chirongwa chekuberekwa chinoberekwa chinosanganisira maviri ehomoni, deogestrel uye ethinyl estradiol, uye kana yakatorwa zvakanaka, inodzivirira kubata pamuviri. Inoshanda kuburikidza kumisa dhi remukadzi kubva pakuzara kukura mwedzi mumwe nomumwe. Evha haikwanise kugamuchira mhombwe uye kubata (kuberekwa) kunodzivirirwa.
Hapana nzira yekudzivirira nayo inonzi 100 inoshanda. Nzira dzokudzivirira kuberekwa dzakadai sekuvhiyiwa kuti ive isina kuchena kana kusaita zvepabonde zvinoshanda kupfuura kupedza mapiritsi ekuberekwa. Kurukurai zvamunogona kuita nekudzivirira kuberekwa nachiremba wenyu.
Mushonga uyu haubvumi kutapukirwa kweHIV kana zvimwe zvirwere zvepabonde. Hazvizobatsiri sepabonde rekukurumidza, sekudai mushure mekusabatwa kwepabonde kusina kudzivirirwa. Mushonga uyu unowanikwa chete nechirongwa chechiremba wako.
Anosungira progesterone uye estrogen receptors. Target masero anosanganisira chikadzi chekuberekwa, chirwere chemamota, hypothalamus, uye pituitary. Imwe yakasungirirwa kumusana, progestin se desogestrel inotadzisa nguva yakawanda yekubudiswa kwegonadotropin kubudisa hormone (GnRH) kubva ku hypothalamus uye kusinganzwisisi kupera kwema-pre-ovulatory LH (luteinizing hormone).
Desogestrel inoshandiswa sechikadzi chokudzivirira pamuviri. Desogestrel inonzi progestin kana kuti yakagadzirisa maitiro evanhukadzi vanoita zvepabonde, progesterone. Mumukadzi anogara achienda kumwedzi, yei inokura uye inosunungurwa kubva mumavhizha (kuvhuvhuta). Irovary inobereka progesterone, ichidzivisa kusunungurwa kwemaawa mairi uye kuvhara chidimbu chechibereko kuti zvive nyore kutora mimba. Kana hutumbi hukaitika, maitiro eprogesterone mumuviri anoramba ari kumusoro, achichengetedza chibereko chechizvaro. Kana mimba isingaiti, progesterone inowanikwa mumuviri inowira, zvichiguma nekuenda kumwedzi. Desogestrel tricks muviri unoita mukufunga kuti ovulation yakatoitika, nekuchengetedza zvakakwirira zve progesterone yakagadzirwa. Izvi zvinodzivirira kusunungurwa mazai kubva mumavhizha.
4. Nzira Yokushandisa Dhiyostestrel Poda?
Zvakakosha kuti iwe unoshandisa mushonga uyu sezvakataurwa nachiremba wako. Usashandisa zvakawanda, usashandise kakawanda, uye usashandise kwenguva yakareba kupfuura chiremba wako akarayira.
Kushandisa kushandisa mishonga yekudzivirira kwemuromo sekuchengetedzeka uye kuvimbwa sezvinobvira, unofanira kunzwisisa kuti sei uye nguva ipi yekuvatora uye kuti zvii zvinogona kutarisirwa.
Mushonga uyu unouya nemirairo ine chirwere. Verenga uye tevera mirairo iyi zvakanyatsonaka. Kumbira chiremba wako kana wemhizha kana une mibvunzo.
Mushonga uyu unowanikwa mu blister packs ne tablet tablet dispenser. Chimwe nechimwe chine mabheti ane mapiritsi e28 ane mavara akasiyana-siyana anoda kuendeswa muhutano mumwechete sezvaanenge wataurwa pane blister pack.
Paunotanga kushandisa mushonga uyu, muviri wako uchange uchitanga mazuva 7 kuti uchinje usati watanga pamuviri. Shandisa nzira yechipiri yekubata pamuviri (semuenzaniso, kondomu, spermicide, kana diaphragm) kwemazuva ekutanga e7 ekutanga kwepiritsi.
Tora DesogestrelSimba panguva imwe chete zuva nezuva. Kuberekwa kwepiritsi kunoshanda zvakanyanya apo hapana maawa anopfuura 24 akapfuura nepakati pemitengo.
Usarega kana kuti kunonoka kutora mapiritsi ako neawa rinopfuura 24. Kana iwe uchinge warasikirwa nechirwere, iwe unogona kutora pamuviri. Kumbira chiremba wako nzira dzokukubatsira kuyeuka kutora mapiritsi ako kana nezvekushandisa imwe nzira yekudzivirira kuberekwa.
Iwe unganzwa uchinetseka kana uchinetseka, kunyanya mukati memwedzi mishoma yapfuura yaunotora mushonga uyu. Kana tsvina yako ichienderera mberi uye isingaendi, dana chiremba wako.
Tevera mirayiridzo iri mumapepa ekurwara kana kudana chiremba wako kana iwe uchirutsa kana uine chirwere mukati me3 kusvika maawa 4 ekutora mushonga uyu. Tora iyi seipi inorasikirwa.
Usadya mazambiringa mazambiringa kana kunwa mazambiringa emuchero paunenge uchishandisa mushonga uyu. Mucherecheche uye jira remurape rinogona kuchinja huwandu hwemishonga iyi inobatwa mumuviri.
Chirwere chemushonga uyu chichave chakasiyana kune varwere vakasiyana. Tevera mirairo yechiremba wako kana kuti mazano ekuraira. Mashoko anotevera anongorira chete mavhareji akawandisa emushonga uyu. Kana mukana wako wakasiyana, usashandure iwo kunze kwokunge chiremba wako akuudza iwe kuti uite saizvozvo.
Chiremba wako angakukumbira kuti utange mazamu ako pazuva rokutanga rokutenda kwako (rinonzi Zuva 1 kutanga) kana musi weSvondo wekutanga mushure mekunge nguva yekuenda kwako inotanga (inonzi Svondo inotanga). Paunotanga pane rimwe zuva zvakakosha kuti iwe uite purogiramu iyoyo, kunyange kana iwe uchinge usina kurasikirwa. Usachinja purogiramu yako pachako. Kana purogiramu yaunoshandisa isiri yakakodzera, taura nachiremba wako pamusoro pekuchinja. Nekutanga kweSvondo, unofanira kushandisa imwe nzira yekudzivirira kuberekwa (semuenzaniso, kondomu, diaphragm, spermicide) kwemazuva ekutanga e7.
Iwe unotanga kutanga yako inotevera uye yose inotevera 28-regimens regimens yerapi pazuva rimwechete revhiki sezvo regimen yekutanga yakatanga uye kutevera purogiramu imwechete.
Nomufomu wemanyoti (mapiritsi):
♦ Kubata pamuviri (kudzivirira kubata pamuviri):
• Vanhu vakuru nevechiri kuyaruka-Chimwe chevhenekeri yerineni (yakashanda) inotorwa panguva imwe chete zuva rimwe nerimwe kwe21 zuva rakatevera rinoteverwa nehwendefa rimwechete (inert) zuva nezuva kwemazuva 7 pakuenda kumwedzi.
· Vana-Kushandisa uye chirwere chinofanira kusarudzwa nachiremba wako.
Dana chiremba wako kana wemhizha kuti uwane mirayiridzo. Mushonga uyu une mirairo chaiyo yevarwere pane zvaunofanira kuita kana iwe usiri kurasikirwa. Verenga uye tevera mirayiridzo iyi uye tumira chiremba wako kana une mibvunzo.
Shandisa chimiro chechipiri chekudzivirira kuberekwa kwemazuva 7 mushure mokunge musipo muroti kudzivirira kubata pamuviri.
Ita kuti chiremba wako azive kana iwe uchinge usisina nguva yako 2 mwedzi mutsara, nokuti izvi zvinogona kureva kuti uri nepamuviri. Iwe unogona kunge usina nguva ye mwedzi iwoyo kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine huwandu huwandu kana kuti uchinje purogiramu yako
Iwe unogona kuva neropa rechiedza kana kuti kuona kana iwe usingatori piritsi panguva. Kana mapiritsi akawanda aunoshaya, iwe unowedzera kuva neropa.
♦ Kana uchinge usisipo imwe piritsi yemuorivhi: Tora mapiritsi nekukurumidza uye utore mapiritsi anotevera purogiramu yako yenguva dzose.
♦ Kana uchinge usisipo maviri mapiritsi emuchero muvhiki 1 kana 2: Tora mapiritsi maviri nekukurumidza uye maviri anotevera mapiritsi zuva rinotevera. Ramba uchitora piritsi imwe pazuva kusvikira wapedza pakiti. Shandisa nzira yechipiri yekudzivirira kuberekwa (semuenzaniso, kondomu, spermicide) kwemazuva 7 mushure mokunge musipo muroti.
♦ Kana iwe ukasarirwa maviri mapiritsi emarangi muvhiki 3, kana iwe ukarasa zvitatu zvepiritsi zvemarangi muvhiki ipi zvayo:
♦ Zuva 1 rinotanga: Dzinga kunze kwepakiti uye tanga peji itsva zuva iroro.
♦ Svondo kutanga: Ramba uchitora mapiritsi rimwe zuva kusvikira Svondo, zvino ubudise kunze kwepakiti uye utange peji itsva zuva iroro. Shandisa imwe nzira yechipiri yekudzivirira kuberekwa (semuenzaniso, kondomu, spermicide) kwemazuva 7 mushure mokunge musipo mubairo, kudzivirira kubata pamuviri. Kana uchinge usina kukwanisa kuenda kumwedzi kwemwedzi 2 mumutsara, tarisa nachiremba wako nokuti unogona kunge wava nepamuviri.
♦ Kana uchinge usisina humwe hwezvinomwe mapiritsi mapiritsi muvhiki 4: Kanda mapiritsi iwe warasipo. Ramba uchitora piritsi imwe pazuva kusvikira wapedza pakiti.
6. Ndiani anogona kushandisa Desogestrelpowder?
Vazhinji vakadzi vanogona kushandisa podder deogestrel, asi iwe unogona kusakwanisa kana iwe:
• Funga kuti unogona kuva nepamuviri
• usingadi nguva yako kuchinja
• Tora mimwe mishonga inogona kuchinja piritsi
♦ kubuda ropa risingazivikanwi mukati memakore kana mushure mekuita zvepabonde
• vakagadzira chirwere chemuviri kana chirwere chemwoyo kana kuti vakave nesitiroko
• ane chirwere chechiropa
• Ive nekenza yepamuviri kana kuti yakave nayo munguva yakapfuura
♦ Ive nehutachiona hwakanyanya kana chiropa
♦ Kana uine hutano uye pasina zvikonzero zvekurapa nei usingafaniri kutora deogestrel powder, unogona kuitora kusvikira wava kuenda kumwedzi kana kuti iwe uri 55.
Iyo pfupa ye-deogestrel yakachengeteka kushandisa kana iwe uchiyamwisa. Zvishoma zvishoma zve deogestrel zvinogona kupfuura mumukaka wako, asi izvi hazvikuvadzi kumwana wako. Iyo haina kuchinja nzira iyo mukaka wako wemukaka unogadzirwa.
Kunyange zvazvo zvisingaitike, pane mikana yakawanda kwazvo yokuti iwe unogona kuva nepamuviri paunotora deogestrel powder.
Kana izvi zvichiitika, hapana humwe uchapupu hwokuti mapiritsi achakuvadza mwana wako asati aberekwa. Kana iwe uchifunga kuti unenge uri nepamuviri, taura neGP yako kana kushanyira kliniki yako yepabonde.
Wana mazano ekurapwa kana iwe uchinge uchinetseka kana kuti usingawanzwisisiki mumarwadzo ako, kana kana nguva yako iri shoma shoma kana kuti chiedza kupfuura zvese. Zvinogoneka kuti idzi inyevero zviratidzo zve ectopic pregnancy, kunyange izvi zvisingawanzoitiki.
haina kukanganisa zvepabonde iwe unogona kunge usina nguva nguva dzose uchiitora - nguva yako inogona kuwedzera, kuwedzerwa, kana kuti inogona kumira zvachose, uye iwe unogona kutarisa pakati penguva
iwe unogona kuishandisa panguva yekuyamwisa hazvikudziviriri kurwisa zvirwere zvepabonde
zvinobatsira kana iwe usingagoni kutora hormone estrogen, iyo iri mumapiritsi akabatanidzwa, chirongwa chekudzivirira pamuviri uye chiringi chemukadzi iwe unofanirwa kuyeuka kuitora iyo kana kuti yakapoteredza nguva imwechete zuva rimwe nerimwe
unogona kuishandisa pane imwe nguva - kunyange kana iwe utsi uye uri kupfuura 35 mamwe mishonga, kusanganisira zvimwe (zvisingawanzo) mishonga, inogona kuita kuti isanyanya kushanda
Rega kushandisa mapiritsi ekuberekwa uye tumira chiremba wako kamwechete kana iwe uine:
♦ zviratidzo zvekurohwa-kamwe-kamwe kusina simba kana kushaya simba (kunyanya kune rumwe rutivi rwemuviri), kamwe-kamwe kuora musoro, kutaura kusinganzwisisiki, matambudziko nemaonero kana kuenzanisa;
♦ Zviratidzo zveropa rinoputika mumapapu-chest pain, chikwama chichikurumidza, kuputika, kukufema nokukurumidza, kukonzera ropa;
♦ Zviratidzo zveropa rinoputika mumakumbo ako-kuputika, kupisa, kupisa, kana kubwinya mune rimwe kana makumbo maviri;
• kurwadziwa kwepfungwa-kurwadziwa kwepfupa kana kushungurudzika, kurwadziwa kunopararira kumusha wako kana papfudzi, kusuruvara, kuputika;
♦ Zvinetso zveropa-chirwere chakaipa chepamuviri, fever, kunzwa kuneta, kurasikirwa kwechido, urinhi dema, denga-mavara zvigaro, jaundice (ruvara rweganda kana maziso);
♦ kuchinja mumutambo kana kuomesa kwemusoro wemusoro;
• kuzvirumbidza mumaoko ako, maziso, kana tsoka;
♦ chifuva chemuzamu; kana zviratidzo zvekuora mwoyo-matambudziko ekurara, utera, kunzwa kuneta, mafungiro anochinja.
♦ kubuda kweropa kana kuonekwa;
♦ Nausea (kunyanya kana iwe watanga kutora mushonga uyu), kurutsa, kupwanya;
♦ kuchinja mukurema kana chido;
♦ kuteterera kuneta kana kuzvimba;
♦ Kusvibiswa kana kusvibiswa kweganda rechitsipa, kuwedzera bvudzi kukura, kurasikirwa kwebvudzi remusoro;
♦ musoro; kana kuchenesa kana kubuda.
9. Desogestrel Powder Effects panguva Yokurwisa
(1) Migumisiro muvana vakaberekwa nevana
Chirwere chisingareviki, chisina kukodzera kuenzanirana chakaenzanisa muromo desogestrel powusika 75 mcg oga zuva rega rega (n = 42) kune imwe yepiruterine device (IUD; n = 40) yakatanga 28 kune mazuva 56 mushure mekuberekwa kwekubata pamuviri. Hapana kupesana muhucheche hwemucheche, uremu kana biparietal head circumferences yakawanikwa mushure me1, 4, uye 7 mishonga yekurapa. Kuwedzerwa kwemazamu kwechinguvana kwakaparidzwa muvana vechi2 uye kuwedzerwa kwekutuka kwakaburitswa muC1 mucheche muboka reousogestrel yehupfu, kana ichienzaniswa nemigumisiro yakaipa yakataurwa mumucheche muboka reIUD. Kukura kwevana vaduku kwakave zvakare kuyerwa pa 1.5 nemakore 2.5; hapana kusiyana kwakakosha kwekliniki kwakawanikwa.
Chifuva (chiyero chisingatauri) kacheche yakagadzirwa nemvere dzemazuva emakore gumi nemana. Amai vake vakanga vagamuchira progestin, dydrogestrone, panguva yekutanga yekutora pamuviri uye akatanga kutora deogestrel powder 0.075 mg zuva rega rega semuchakato kutanga pamwedzi we3 mushure mekuberekwa. Amai vake vakagura deogestrel powder mushure mezuva re28 uye vhudzi rinoputika rakagadziriswa nemwedzi ye11 yemakore. Desogestrel powder yaiva inokonzera kukonzera kukonzera vhudzi kukura mumucheche uyu.
(2) Migumisiro yeLactation uye Breastmilk
Chirongwa chisingareviki, chisina kukodzera kuenzanirana chakaenzanisa muromo wezvinyorwa zveestogestrel 75 mcg oga zuva rega rega (n = 42) kune chigadzirwa chemukati (n = 40) chakatanga 28 kune mazuva 56 mushure mekuberekwa kwekubata pamuviri. Munguva yemwedzi we7 muedzo, mukadzi we1 akadzingwa kubva mukutongwa nekuda kwechikafu chechikafu chinomiririrwa nechomwe musangano reIUD. Pakupera kwekutanga uye wechina kurapwa, kwakanga kusina kusiyana kwehuwandu hwomukaka hwakakonzerwa pakati pevirgy deogestrel uye mapoka eIUD. Hapana kusiyana pakati pe triglyceride, mapuroteni kana lactose zvakagadzirwa nemukaka zvakawanikwa pamagumo e1, 4, uye 7 mishonga yekurapa.
Chidzidzo chisina kukanganiswa chakazotevera vakadzi veHNUMX vakapiwa chirongwa chekudzivirira chirwere chedogestrel 200 mcg zuva remwedzi we75 kutanga pamasvondo e6 mushure mekubvira uye akazvienzanisa navakadzi ve6 avo vakagamuchira nzvimbo yekugara. Hapana misiyano yakawanikwa muzviyero zvekugadzirwa kwemukaka kana kukura kwechecheche uye kubudirira pakati pemapoka maviri.
10. Zvokudya zveDoogestrel Zvakatengeswa
(1) Zvimwe zvinowanikwa paDesogestrel Powder suppliers
(2) Shandisa Puriji reDogogestre ikozvino
♦ Google AASraw, pinda pa www.aasraw.com.
♦ Tsvaga Dorogiroyo Powder paAASraw
• Tsvaga Desogestrel Powder windows XP, uye nyora pasi requirmnets yako.
♦ Tinowana email yako uye tinotaura zvakawanda nezvako.
♦ Simbisa chirongwa, ipapo kubhadhara kwatakaita uye tichagadzirisa zvinhu zvekuendesa kwauri gare gare.
(3) Kuwedzerwa Kwokutenga Deogestrel Poda Kubva AASraw
1.High Quality Nekukwikwidza Mutengo:
1) Kuchena:> 99%
2) Isu tinogadzira uye tinokwanisa kupa zvinhu zvakanakisisa zvekutengesa nefekitari yemutengo.
2.Fast Uye Yakachengetedzwa Yakachengeteka:
1) Chikamu chinogona kutumirwa mumaawa 24 mushure mekubhadharwa. Nhamba yekutevera iripo
2) Kutenga kwakachengeteka uye kwakangwara. Nzira dzakasiyana-siyana dzokufambisa dzaunosarudza.
3.We Tine Clients Munyika Yose:
1) Unyanzvi hwehutano uye ruzivo rwakawanda hunoita kuti vatengi vanzwe vakasununguka, zvikwata zvakakwana uye kuburitsa nokukurumidza zvinosangana nechido chavo.
2) Mhinduro yemusika uye zvinhu zvinoshandiswa mhinduro zvicharumbidzwa, kusangana nevatengi 'zvinoda basa redu.
3) High quality, kukwikwidzana mutengo, kubhadhara nokukurumidza, kushanda kwekutanga kunowana kuvimba uye kurumbidzwa kubva kune vatengi.
1) Kuendeswa kwakachengetedzeka: Chiteshi chekutsinhanisa, kuchengetedza hutano hwevatengi.Uye chete kana zvichiitika, iva nechokwadi chekudzosa zvakare.
2) Haambogoni kuchinja: Chigadzirwa chinogara chichiramba chakachena, hachizoshanduki, High quality ndiyo tsika yekambani yedu.
3) Mabasa akanaka: Sokurumidza sezvinobvira kugadzirisa vatengi matambudziko, kuitira kuti vatengi vagamuchire zvinhu zvakanaka.
Tags: Tenga Desogestrel powder, Desogestrel powder
Ichi Ndicho Chimwe Chinhu Chaunofanira Kuziva Nezve Bortezomib Zuva Rini 4-DHEA Inotendeuka Ku Testosterone?
Mariel on Chirwere cheAlzheimer J147: A Potent Curcumin Anoita J147 Neurotrophic Compound
Dongmin Lee on Chirwere cheAlzheimer J147: A Potent Curcumin Anoita J147 Neurotrophic Compound
Dede on Chirwere cheAlzheimer J147: A Potent Curcumin Anoita J147 Neurotrophic Compound
dora on Chirwere cheAlzheimer J147: A Potent Curcumin Anoita J147 Neurotrophic Compound
Barney on Chirwere cheAlzheimer J147: A Potent Curcumin Anoita J147 Neurotrophic Compound